गजब छः अनुपविक्रम ब्रेकअप भयो भन्ने, मलिना कहिले थियो प्रेम भन्ने ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home मनोरञ्जन गजब छः अनुपविक्रम ब्रेकअप भयो भन्ने, मलिना कहिले थियो प्रेम भन्ने ?
नायक अनुप विक्रम शाही र नायिका मलिना जोशीको प्रेम थियो भन्ने त सबैलाई थाहा छ । अनुप र मलिना एकसाथ कार्यक्रममा प्रेमी-प्रेमिका भन्दै नहिडेका पनि होइनन् । तर, गतबर्ष चलचित्र ‘ठमेल डट कम’ चल्ने बेलामा अनुप र मलिनाको व्रेकअप भयो भन्ने समाचार फैलिएको थियो । श्रोतका अनुसार सो हल्ला अनुप आफैले चलाएका थिए । मलिना अमेरिका पुगेर नफर्किएपछि अनुपले यो चर्चा चलाएको वुझिन्छ । अनुपको चलचित्र चलाउने फन्डा पनि थियो त्यो ।
तर, आज आयोजित एक कार्यक्रममा भने मलिनाले यो कुरा अस्विकार गरिन् । उनले ‘मैले कहिले अनुप र म विच प्रेम थियो भनेर मिडियासँग भनेको छु र’ भनिन् । मलिनाले प्रेमको बिषयमा बोल्न नै चाहिनन् । उनले आफूले प्रेम भएको कुरा नै कहिले नगरेको भन्दै ब्रेकअपको बिषयमा पनि बोल्न आवश्यक नभएको भनिन् ।
मलिना र अनुपको कुरा गजबकै छ । अनुप मलिनासँग प्रेम छुटेको कुरा गर्दै हिडेका छन् भने मलिना मेरो प्रेम नै कहिले भएको थियो र भन्दै हिडेकी छिन् । तर, यी दुइलाई एकसाथ सडकमा हिड्दै गरेको देख्नेको पनि यहाँ कमी छैन । मिडियासँग प्रेम छैन भनेर लुकाउन त सकिएला तर प्रत्यक्ष देख्नेहरुलाई कसरी झुक्याउने मलिना जी ?
तीन वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर